लकडाउनमा गाँउ फर्केका गायक अकृत गुुरुंङको घरमा सर्प पसेपछि « गोर्खाली खबर डटकम
नेपाली चेली बर्षाले जापानमा ज’न्माईन एकैपटक तीन सन्तान, त्यो पनि सात महिनामै
विद्युतको तार चुुंंडिएर करेन्ट लाग्दा ४ भैसिकाे मृ/त्यु
दुई वर्ष देखि कुनै पुरुषको नजिक नै नपरेकी यि महिला कसरी भइन् गर्भवत ? त्यसपछि मानिसहरु यसको पछाडिको कथा जान्न चाहन्थे !
डा. शेखर कोइराला:एमसीसीबारे पूर्वप्रधानमन्त्रीको एकमत हुनुपर्छ
२ करोड २४ लाख ९२ हजारको सुन सहित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट २ जना पक्राउ
सार्वजनिक यातायातमा गहना र सामान लुटपाट तीन जना प’क्राउ
रुखमा डेरा बनाएर अनलाइन कक्षामा सहभागी हुने धनकुमारले पाए शैक्षिक सामग्री
कक्षा १२ मा अध्ययनरत बिमला श्रेष्ठको बो’नम्या’रो प्र’त्यारोपण गर्न आर्थिक अ’भाव, सहयोगको आव्हान
विवाह गरीसकेकी वेहुली नवौं पटक बेहे गर्न लाग्दा पक्राउ, स्वास्थ्य जाँच गर्दा सबैको होस् उडायो !
लकडाउनमा गाँउ फर्केका गायक अकृत गुुरुंङको घरमा सर्प पसेपछि
२०७७ असोज २ गते शुक्रवार प्रकाशित
काठमाडौ । कोरोनाको महामारी सुरु भएयता चर्चित नेपथ्य ब्याण्डका गायक अमृत गुरुङ गाउँ फर्केका छन् । कास्कीको उनको गाउँमा उनी खेती किसानीमा रमाएका छन् । समय समयमा उनी गाउँका खबर सामाजिक सञ्जालमा पस्किन्छन् । गाउँको आफ्नै गोठमा भैसी पालेर खेतीमा रमाएका अमृतको घरमा एउटा स’र्प आएपछि उनी डराएको बताएका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा सो बारे जानकारी दिँदै उनले लेखेका छन्, हिजो गोठ परिसरमा स’र्प देखियो। गोठका सबै आ’त्तिए र हामीले स’र्प रेस्क्यु गर्नै भाइलाई खबर गर्यौं, वहाँहरुको द्रुत सेवा देखेर खुसी लाग्यो। वहाँहरुको अनुसार ‘क’पर हेडेड नन भेनमस ट्रिकेट’ रहेछ । स’र्प वि’शा’लु हैन भनि थहा पाए पछि ढुक्क भएम ।
उनी उनको खेतबारी र गोठमा भएका साना साना कुराहरु पनि ट्वीटरमा अपलोड गर्ने गर्छन् । हाले उनले लेखेका थिए, गोठमै पाएर हुर्कँदै गरेको यो मायालु बिरालोको बच्चो।।। बच्चाहरु प्राय मायालु नै हुन्छन् । गोठमा मुसाले हैरान पारेपछि बिरालो ल्यायौं, त्यसपछि मुसाको समस्या खतम। कहिले काँही दुध चोर्न खोज्ने सानो दुर्गुण बाहेक यीनीहरु गोठको परिवारमा राम्रैसँग घुलमिल भएर बसेका छन्।
केही समय अघि गाउँको बाँझो खेतको फोटो राख्दै अमृतले खिन्नता ब्यक्त गरेका थिए । उनले लेखेका थिए, छिमेकमा यस्ता बाँझो खेत र सिस्नु उम्रेका आगन देख्दा मन काट्छ । यस्ता घर ९ खेत छोडेर संवृद्धि खोज्दै जाने कयौं, विदेशी भुमीमा अहिले अलपत्र छन् । के ठिक के बेठिक , अब त खुट्ट्याउनै सकिएन।।। हुने र सक्नेले आफ्नो भुमी बाँझो नराखौं ।
दुई महिना अघि अमृतको भैसी ब्यायो । भैसी ब्याएको कुुरा अमृतले ट्वीटरमा यसरी लेखे रातभरी पानी पर्यो, विहान भैंसी व्यायो । हैन। भैंसी व्याउने बेला जहिल्यै पानी पर्छ । भैंसी र पानीको के साइनो होला ? हुन त अँग्रेजीमा यसलाई वाटर बफेलो भन्छन् क्यारे ? पाँच वर्ष अघि यही गोठमा जन्मेकी सेती पाँडी, यो पटक समेत दोस्रो पटक व्याएको हो ।
भारतको असंवेदनशील कूटनीतिले हद नाघेपछि नेपालले नक्शा निकालेको होः भारतीय पूर्वमन्त्री
सरकारले दशैंमा प्रति घर परिवारलाई १० हजार राहत दिने
साताकाे पहिलाे दिन आइतबार ह्वात्तै घट्यो सुनकाे भाउ, यस्ताे छ आजकाे भाउ
६ जनाको ज्या’न लिनुको पछाडी यती ठुलो रहष्य,यसरी गरे सार्वजनिक कति बस्लान जे’ल-भिडियो हेर्नुहोस्.